कथा वी Oseeva "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades": सारांश, वर्ण
को चिरपरिचित सोभियत लेखक वी ए Oseeva एक अद्भुत कथा "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades" लेख मा प्रस्तुत छ एक सारांश जो, लेखे। पुस्तक विद्यार्थीहरूको लागि पढ्न सिफारिस गरिएको छ।
सामान्य मास्को स्कूल को विद्यार्थी - - महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को समयमा उनको कहानी मा, त्यो केटाहरू र बालिका को रोचक साहसिक वर्णन गर्दछ। यस्तो आफ्नो अध्ययन मा आपसी सहायता, भरोसा प्रतिष्ठा, मित्रता, काम र लगनशीलताको रूपमा अवधारणाहरु विश्लेषण। वी ए Oseeva 1941 देखि 1951 को सोभियत छोराछोरीको जीवन औंल्याए।
पहिले हेरविचार, साथीहरू र भ्कगडा बिना अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू, दैनिक जीवन वर्णन गर्दछ। अचानक त्यहाँ एउटा युद्ध आउछ, र Vasek एक trumpeter र आफ्नो मित्र माथि धेरै चाँडै, भयानक घटनाहरू अनुभव, वयस्क संग एक बराबरीको मा शत्रु संग लडाई मा सहभागी बढ्न।
10 14 वर्ष देखि विद्यार्थीहरू वयस्कहरूको लागि तर पनि - कथा नै एक धेरै रोचक र instructive यो सिर्फ बच्चाहरु को लागि छैन, तीन पुस्तकहरू विभाजन गरिएको छ। कथा "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades" काम एक सारांश को सार बुझ्न, तर यो सारा पुस्तक पढ्न राम्रो छ।
पहिलो पुस्तक। युद्ध अघि
पहिलो पुस्तक सोभियत अवधि विद्यार्थीहरूको स्कूल दिनचर्या वर्णन: को मान्छे क्रिसमस पार्टी स्कूल लागि तयार छन्, कक्षा एक क्रिसमस ट्री सजाउनु। यो घटना सन् 1941 मा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। सबै मास्को मा स्थान लिन्छ।
Vaska Trubacheva - - नायक को आमा मुख्य कथा मर्छ, र उहाँले आफ्नो पिता संग छ। आफ्नो साथीहरूसँग बदमास केटो। तिनीहरूले एक पटक अनियमित रेल मा लगभग बाँकी। आफ्नो बुबा उहाँले लामो यात्रा मा काम गर्न जाने बाध्य छ रूपमा, उनको छोरा पछि हेर्न आफ्नो बहिनी कल गर्न निर्णय गर्दछ। हो, र यो कठिन घरको संग एक्लै सामना गर्न छ। पहिलो कठिन मा केटा चाची Dusya संग सम्बन्ध छ, तर त्यसपछि तिनीहरूले सँगै आउँछन्।
जो आफ्नो पुस्तक Oseeva मा वर्णन गर्छ? Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades - विद्यार्थी4"बी" वर्ग। टोलीमा सबै हेर्दै र achievers भ्रमण, सामान्य मा एक पर्खाल समाचार पत्र, उत्पादन, विद्यालय जीवन फोडे, धेरै अनुकूल छ! केटाहरू र बालिका, स्किइङ जाने सिनेमा जाने र स्कूलमा truant खेल्छन्। को जुन 1941 परीक्षाहरू वर्ग मा राख्दै पछि युक्रेनमा अभियान मा जान्छ। त्यसैले पहिलो कथा च्याट "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades" लेख मा बाहिर सेट एक सारांश जो, समाप्त हुन्छ।
दोस्रो किताब। युद्ध
दोस्रो पुस्तकमा वर्णन कसरी सामूहिक खेत अध्यक्ष खुसीसाथ ग्रामीण विद्यालयमा स्थित भएकालाई detachment भेटे। साँझ, तिनीहरूले स्थानीय विद्यालयमा वरिष्ठ संग भेला र एक pyre अग्रगामी गरे। बाजा छोराछोरी शान्ति आकाश झन्झन् रोशनी तारा लागि गीतहरू गाए, सुनिन्थ्यो। यो प्रविष्टि Oseeva को शुरुवात देखि।
Vasek एक trumpeter र तिनका साथीहरू को सौहार्द र विश्राम रमाइलो गर्न समय छैन। अर्को दिन, विद्यार्थीहरू एउटा सानो detachment शिविर गए संग्रहको लागि तयार र जुन 20, 1941। शिविरमा केटाहरु fished, को जंगल मा रात को लागि रोकियो, र बालिका खाने तयारी गर्दै थिए। दुई मानिसहरू अनुसार राति होसियार उभिए। युद्ध को प्रकोप र detachment नाजी-कब्जा क्षेत्रमा थियो।
एक आमूल परिवर्तन
यहाँ पहिलो Oseeva हानि वर्णन गर्दछ। "Vasek एक trumpeter र तिनका साथीहरू" (सारांश, तल हेर्नुहोस्) - बस एक साहसिक छैन यो छ, पुस्तक युद्ध द्वारा भङ्ग बच्चाहरु को भाग्य बारेमा गहिरो कथा।
बालिका र शिक्षक कैदी थिए। छोराछोरी कहाँ बासिन्दाहरूले गर्ने mercilessly हत्या, looted शत्रुहरूले आक्रमण थिए गाउँमा फर्के, गाई सखाप अन्नको विनाश घरमा टाढा लगे। तानाशाह मुख्यालय गाउँमा स्कूल, बच्चाहरु रोकियो जहाँ मा स्थित छ। आफ्नो दस्ते समूहमा काम गर्न र गाउँलेले बस्न बाध्य भएको थियो। Vasek मित्र एक सामूहिक खेत अध्यक्ष बस्थे, र त्यसपछि तिनीहरूले जंगल मा लुकाउनु भएको थियो।
Vasek - कमान्डर
कथा "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades", हामी विचार गर्दै छन् जो एक सारांश, मान्छे अग्निपरीक्षाहरू आफ्नो कसरी परिवर्तन देखाउँछ। Trubachov चाँडै परिपक्व र आफ्नो हात मा बच्चाहरु लागि जिम्मेवारी लिन्छ। साहस र लगनशील भई लागिरहेमा देखाउँदै उहाँले कमान्डर र मिलेर उहाँको आदेश अन्तर्गत सबै बच्चाहरु भए।
उहाँले धीरज शक्ति र अरूलाई मदत गर्न, आफ्नो बुबा फर्कन जर्मन बाट उम्कन इच्छा जस्ता गुणहरू सहायता छ।
सामूहिक खेत अध्यक्ष भएकालाई मन थिएन, जर्मन को वार्डेन भयो, र तिनीहरूले देशद्रोही को रोटी खान चाहँदैनथे, गाउँमा छोड्न निर्णय गरे। Pasechnik Matveyevich अर्को गाउँमा गर्न प्याकेज बोक्नु Trubacheva कार्य दिनुभयो। जवान कमान्डर, classmate Koley Odintsovym साथ तिनीहरूले जंगल मा एक भाँचिएको कार संग रात बिताउन थियो, लामो let गयो। यो डरलाग्दो थियो, तर मान्छे साहस र लगनशील भई लागिरहेमा देखाएका छन्, तिनीहरूले पुग्न सक्षम थिए। तिनीहरूले गन्तव्य पुगेपछि तिनीहरूले झोला माथि हस्तान्तरण र फिर्ता आफ्नो हट गए। गाउँमा मान्छे लगभग सडक मा बाहिर जाने र छैन Gallows मा थिएन corpses हङ, शान्त थियो, त्यहाँ मिसिन बन्दुक संग जर्मन थिए। मान्छे, Trubacheva, धेरै, खुशी उदास भेट तिनीहरूले समाचार साझेदारी।
उहाँले फर्कंदा, Vasek अध्यक्ष भेटे। उहाँले तिनलाई अङ्कमाल गर्न प्रयास गर्नुभयो, तर Vasek तर्फ आफ्नो गर्व गर्ने देशद्रोही संग कुराकानी गरौं छैन। एक देशद्रोही, बस भरोसा तिनीहरूलाई आउन जर्मन मानिरहेको - रात मा, वयस्क को कुराकानीमा overhearing, त्यो Stepanych अध्यक्ष बुझे। पछि Stepanych Trubacheva महत्त्वपूर्ण कार्य निर्देशन र जर्मन देखि मान्छे को धेरै बचत गरियो।
एक नायक को मृत्यु
पुस्तक "Vasek एक trumpeter र तिनका साथीहरू" को सारांश जारी, हामी Oseeva त्यो एक बच्चाको पुस्तक लेखिएको थियो भन्ने तथ्यलाई भए तापनि वास्तविकता embellish कि छैन, घटनाको शोकमा बढ्छ छैन, याद गर्नुहोस्।
चाँडै केटा बस्ने घर, आगो मा जर्मन सेट भएको थियो। घर मालिकले आफ्नो हात मा मृत्यु भयो। हजुरबुवा Mikhailov, आफ्नो अग्रगामी, नाजीहरूले सबैको सामने फाँसी, त्यसैले तिनीहरू उहाँको मदत बारेमा partisans सिके। त्यसपछि युक्रेनी शिक्षक विद्यार्थी सिकाउन गोप्य थाले, तर यो लामो, त्यो बालिका अगाडि गोली थियो जर्मन पछिल्लो थिएन।
Trubachov Makarovka को बालिका आफ्नो एकाइ थिए जहाँ फर्के, र एक शिक्षक र आफ्नो स्कूलका साथीहरू को मृत्यु मा एक चिन्ह देखे, म बल्लतल्ल पहाड बाँचे, स्तब्ध भयो। अचानक र अप्रत्याशित रूपमा शिविर मा गुरिल्लों देखा, तिनीहरूले छोराछोरीलाई उद्धार र "मुख्य भूमि" घर प्राप्त गर्न मदत। मान्छे मास्को पहिलो विमान मा राखे। बच्चाहरु चाँडै आफ्नो प्रियजनलाई देख्ने धेरै खुसी छन्।
तेस्रो पुस्तक। को रियर। युद्ध पछि,
तेस्रो पुस्तक चाची Dusya Vaska संग आनन्दित बैठक को विवरण संग शुरू हुन्छ। त्यो स्वागत तिनका साथीहरू व्यवहार गर्नुहुन्छ। Sasha Bulgakov आमाबाबुले शहर बाहिर छन्, र उहाँले Trubacheva बस्न जारी छ। चाँडै, विद्यार्थीहरूले घाइते हेरचाह गर्न मदत, अस्पताल मा काम गर्न आयोजना गरिन्छ। तर, मान्छे हेर्दै सुरु र repeaters रहन छैन, पाँचौं ग्रेड कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहनु शिक्षक माग्छु।
चाँडै नै त्यहाँ आफ्नो निर्देशक छ, र हरियो wasteland नयाँ विद्यालय निर्माण हुनेछ भन्ने खुसी tidings रिपोर्ट। Vasek एक trumpeter र तिनका साथीहरूले सक्रिय यसको निर्माण संलग्न छन्। तिनीहरूले सफलतापूर्वक अध्ययन र काम संयोजन।
अन्तमा नयाँ विद्यालय खोल्न र जोसिलो चेलाहरू नयाँ डेस्क मा बसे। चाँडै उहाँले अगाडि र Trubacheva पिता देखि फर्के।
पछिल्लो अध्याय कथा को शुरुवात संग resonates कि नयाँ वर्ष उत्सव वर्णन गर्दछ। युद्ध हामी जीवन फेरि मा जान्छ, उठे, समाप्त भयो।
लेखकले अन्तमा आफ्नो पाठक ठेगाना र उदाहरणको रूपमा कार्य Trubacheva र आफ्नो comrades राख्छ। आफ्नो शेयर भयानक युद्ध बच्न ड्रप, तर मान्छे परित्याग गरेनन् र bravely आफ्नो युवा उमेर बावजुद, अन्त गर्न लडे। पुस्तक विद्यार्थीहरूले परिश्रम र मेहनत सिकाउँछ, कहिल्यै आफ्नो लक्ष्य मा परित्याग र केवल एक कदम पछि, अगाडि जान। Patriotism, देश प्रेम - यी यो सम्भव धेरै मान्छे को जीवन बचाउन गरिएका जो सोभियत छोराका गुणहरू छन्। यसरी आफ्नो कथा प्रणय Oseeva समाप्त ( "Vasek एक trumpeter र आफ्नो comrades")। लेख मा वर्णन काम छोटो सामग्री।
"Pallada" द रूसी जहाज। "फ्रिगेट" Pallada "- यात्रा Goncharova आई निबन्धहरू
युद्ध गर्न टोलस्टोय मनोवृत्ति कस्तो थियो?
विक्टर Astafieva द्वारा पुस्तकहरु: कामहरू एक जीवनी
Lermontov M.Yu. मा विषय मातृभूमि को मातृभूमि बारे Lermontov गरेको कविता
विशेषताहरु Prostakova Terentiya, landowner
उत्पादन Fonvizina "Oaf" मा एक निबंध कसरी लेख्न
रूपमा "Maynkraft" धोखा कार्यक्रम र कन्सोलमा मार्फत?
नाक कुनै पनि polyps: कारणहरू र उपचार
काठ worktop: जब एक भान्सा छनौट भन्दा प्रकार र सामाग्री प्रदर्शन को विशेषताहरु
"Kirillovka" - Kirillovka (युक्रेन) को गाउँमा रिसोर्ट: विवरण, समीक्षा, फोटो
Meatless नाश्ता: च्याउ सस संग नुस्खा चामल केक
के नाबालिग को आपराधिक दायित्व को सुविधाहरू?
कालो truffles: विवरण
एफएम Dostoevsky, "राक्षस" - उत्पादन एक सारांश
Peroneal ताकत neuropathy: कारणहरू र नतिजा
लेखा को रिकभरी लागि प्रक्रिया